तपाईं सुन्नुहुन्छ? | Martech Zone
बिहीवार, जनवरी 30, 2014 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 जेन लिसाक गोल्डिंग
के तपाईंले कहिल्यै ब्रान्ड वा कम्पनीमा अनलाइन ग्राहक सेवा मुद्दा वा उत्पादन वा सेवाको मुद्दालाई रिपोर्ट गर्न सम्पर्क गर्नुभयो?
के तपाइँ कहिल्यै निराश भएको छ जब ब्रान्ड वा कम्पनीले तपाइँको अनुरोधलाई सहज प्रतिक्रिया गरेन? तपाईंले अनुरोध गर्नका लागि समय निकाल्नु भयो?
यसको सामना गरौं - हामी सबै व्यस्त छौं र जीवन कहिलेकाँही सोशल मिडियाको मार्गमा जान्छ। तर यो पनि हो [हाम्रो केहि कामहरू] हाम्रो ब्राण्डको सामाजिक मिडिया नेटवर्कमा प्रत्येक र (व्यावहारिक र वास्तविक) अनुरोधको जवाफ दिन जिम्मेवार हुन। मेरो धेरै मार्केटिंग साथीहरूको लागि, तिनीहरू तुरून्त सोशल मिडिया स्रोतमा समस्याको रिपोर्ट गर्न जान्छन् जुन उनीहरूले ब्राण्डको साथ अनुभव गरेका छन्। जब उनीहरूले कुनै उत्तर वा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दैनन्, यो समय ब्रान्ड स्विच गर्ने बारे सोच्नको लागि समय हो। अधिक बजार र अधिक ब्रान्डको विश्वमा, यो कम्पनीहरूले लिनु खतरनाक जोखिम हो।
त्यसोभए, सिक्काको अर्को पक्ष पनि छ: केही व्यक्तिहरूले अनलाइन ब्रान्डको उल्लेख गर्छन् तर उनीहरूले ब्रान्ड ट्याग गर्दैनन् त्यसैले कम्पनी सचेत हुँदैन कि कसैले उनीहरूको गुनासो गरे। यो प्रतिक्रिया नगर्दा केवल एक विनाशकारी हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै हराएका अवसरहरू छन् जब तपाईंलाई सचेत गराइँदैन जब तपाईंको ब्रान्ड उल्लेख गरिएको छ वा डाटा ट्र्याक गरिरहेको छैन।
तरिका तपाईले सामाजिक सुन्ने सुधार्न सक्नुहुन्छ
तपाइँको ब्रान्ड कुञ्जी शव्दहरूमा सतर्कताहरू सेट अप गर्नुहोस् - कसैले तपाईंलाई उल्लेख गरेको छ जब तपाईं बताउन मात्र सामाजिक मिडिया नेटवर्क मा भरोसा नगर्नुहोस्; निश्चित गर्नुहोस् गुगल अलर्ट सेट अप गर्नुहोस् प्रासंगिक सर्तहरूको लागि (कम्पनी नाम, कम्पनीको उपनाम, कम्पनी उत्पादनहरू, आदि) वा ट्र्याक कुञ्जी शव्दहरूको लागिHootsuite .
अपेक्षाहरू सेट गर्नुहोस् जब तपाईले अनुरोधहरूको जवाफ दिन उपलब्ध हुनुहुनेछ - कहिलेकाँही, मानिसहरू निराश हुन्छन् जब तपाई समयमै जवाफ दिनुहुन्न। धेरै समय, व्यक्तिले सोच्न सक्दछ कि ब्रान्डहरू जहिले सामाजिक मिडिया प्रतिक्रियाको लागि उपलब्ध छन्। त्यो सधैं सत्य हुँदैन। @ भिस्टा प्रिन्टहेल्प यी अपेक्षाहरू सेट गर्ने राम्रो कार्य गर्दछ। तिनीहरूले समय र दिनहरू दिन्छन् जुन उनीहरू अनुरोधहरूमा जवाफ दिन उपलब्ध हुनेछन्।
योजना बी - यदि तपाईंसँग २ hour घण्टा सोशल मिडिया समर्थन छैन भने सम्पर्क सम्पर्कको साथ लिंक उपलब्ध छ जुन मानिसहरूले कुनै पनि समयमा तपाईंको कम्पनीमा पुग्न प्रयोग गर्न सक्दछन्। मँ सुझाव गर्दछु कि ईमेल (वा फारम), फोन, वा च्याट प्रणाली।
समस्या अफलाइनमा लिनुहोस् - सुन्ने क्रममा, यदि तपाईं रिसाएको ग्राहकले भेट्नुभयो भने, त्यसपछि ग्राहकलाई अफलाइनमा लैजानुहोस्। तपाईंलाई फोन नम्बर वा ईमेल पुग्नुहोस् जुन तपाईं पुग्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि कसरी मद्दत गर्ने भनेर छलफल सुरु गर्नुहोस्। एक पटक समस्या समाधान भएपछि तपाईले सार्वजनिक रूपमा पोष्ट गर्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईले समस्या समाधान गर्नुभयो र ग्राहकहरु लाई सोध्नुहोस् कि तिनीहरु सन्तुष्ट छन्। उपलब्ध हुनु र तपाइँको ब्रान्डको बारेमा के भनि भइरहेको छ भनेर सचेत हुनु महत्वपूर्ण छ। यसले खुशीका ग्राहकहरूलाई नेतृत्व दिनेछ (यदि उनीहरू अस्थायी रूपमा दुखी भए पनि), र ठूलो राजस्व।
टैग: ग्राहक सेवाप्रतिष्ठासामाजिक श्रवणसामाजिक संजालसामाजिक अनुगमनभिसाप्रिन्ट
डिजिटल पदोन्नति सामाजिक प्रमोशन को स्ट्रिमलाइन गर्न को उपयोग गर्दै